Warshadaha kumbuyuutarrada kala duwan ee Shiinaha oo ah warshad duulista otomatiga otomaatiga ah iyo soosaarayaasha | EBIL
Heerka socodka xawaaraha:
Nalka: 120 m / min. Buuxa: 90 m / min
Ujeedka saxda ah:
Isku dar ama laga jaray 3 mm
SIEMENS PLC 1200 taxane
EBILTECH Nidaam gobal oo badan waa nidaam xirmo oo otomaatig u ah keydinta xamuul yaryar. Nidaamka khafiifinta waxaa loogu talagalay arjiyada halkaas oo wax soo saar sare iyo helitaan heer sare ah ay muhiim u yihiin, tusaale ahaan gudaha Tafaariiqda & E-ganacsiga dib-u-celinta ku-celinta, dib-u-buuxinta ama dib-u-habeynta amar isku-darka. Booyadku wuxuu bixiyaa labalaab labajibbaar qoto dheer oo totes, baakado iyo kartoonno. EBILTECH Nidaam gobal oo badan waxay ku habboon tahay bey'adaha lagu keydiyo qaboojinta. Si loo yareeyo tirada haadaka, xamuulka waxaa la dhisi karaa ilaa 150 m dherer ah iyo 25 m sare.
* Qiimaha Gaarka ah ee Gaarka ah: Laba-wareeg, Wada Gaari, iyo Tandem kor u habeyn ah - oo ay weheliso xirmooyin xawaare sare leh iyo kontorool caqli leh * Kaydinta Cufnaanta Sare: Qotodheer-qoto-dheer, kaydinta waxgaradka ee kartoonnada kala-duwan oo cabirkoodu kala duwan yahay ayaa dib-u-adeegsi ballaadhan ka sameeyey deegaannada, qaboojiyaha, ama qaboojiyaha. * Model iyo dabacsan: Nidaamku wuxuu la jaan qaadayaa qaabaynta dhismaha, oo ay ku jiraan dhismayaasha jira ee leh dusha sare ee saqafka sare. Xirmooyin dheeri ah ayaa si fudud loogu dari karaa si ay u bixiyaan qalqal badan. * Wax ku ool ah, Sax ah, Lagu kalsoonaan karo: EBILTECH Nidaamyo badan oo ubadku waxay ku shaqeeyaan jawi wanaagsan oo 'koronto shidan'. Waxay hubiyaan dayactir fudud iyo ugu badnaan waqti qaadashada.
Xawaaraha Korantada ee loogu talagalay Sanduuqyada, Toteska iyo Xirmooyinka
Kordhinta xawaaraha maareynta u dhexeysa aagagga. Dayactir hooseeya
Masaafada u dhexeysa rakibaadda waxaa qarin kara aalado gaadiid oo kaladuwan, kuwaas oo caadiyan lagu daray baahi
Shuruudaha la xiriira shaqeynta iyo inta jeer ee mid kasta oo ka mid ah nidaamka.
Adeegsiga habka wadista gawaarida iyo nidaamyada ogaanshaha jiritaanka ee ay suurtagelisay aaladaha farsamaynta baarista indhaha ama aragga ayaa u oggolaanaya sanaadiiqda
Lagu wareejin doonaa xaaladdo la xukumay oo loo wareejiyo jagooyinka aad rabto.
1. Hal abuurnimo ayaa laga helaa goobta shaqada halkaas oo hawl wadeyaashu iska baaraan koodhyada aaladaha lagana wareejiyo alaabada totes alaabada.
2. Xaashiyaha alaabada ayaa la keenaa oo si otomaatig ah ayaa loogu keydiyaa wax soo uruurinta xufnaanta sare.
3. Markii loo baahdo, alaabada alaabada ayaa la soo celiyaa oo waxaa loo hayaa saldhigyada laga soo qaado.
4. Nalalka iyo tilmaamaha jaantusku waxay toos ugu sheegaan hawlwadeennada inay ka soo qaadaan alaabada loo baahan yahay oo ka mid ah taarikada alaabada lana dhigo
5. Marka weelka amarku dhammaado, si otomaatig ah ayaa loogu wareejinayaa goobta wax lagu kala qaado.
6. Xawaaraha alaabada lagu soo celiyo waxay ku noqotaa meel ku keydka cufnaanta badan.
Waxay ka kooban tahay qaabdhisme oo leh nidaam waddo isku-dhafan oo isku-dhafan, oo leh noocyo badan oo microshuttles ah oo xirmooyin qashinka alaabada u dhexeeya goobaha keydka ee rugaha iyo saldhigyada loo adeegsan karo soo qaadidda iyo dib u buuxinta. Wiish kor u kaca ayaa oggol
xirmooyin si ay kor iyo hoos ugu socdaan inta udhaxeysa heerarka santuuqa iyo rugaha la heli karo.
Software-ka ayaa xakameeya taraafikada wadada, yareynta wax soo saarka iyo yareynta waqtiyada hagaaga. The interface user-saaxiibtinimo muujinaysaa
xogta waqtiga-dhabta ah ee nidaamka oo dhan, iyadoo bixinaysa dulmar guud oo ka kooban dhammaan qaybaha.
Qalabka Birta , Suuqa Suuqa , Xidhitaanka lakabyo Badan , Asal aamisan , Xarig , Wadada Shanaad ,